Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Nihena ny fameperana tao Bangkok satria nilatsaka 30% ny isa COVID
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Tsy tokony hatao vaksiny feno sy / na handalo fitsapana COVID-19 izao ireo mpiaro ny sakafo any amin'ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana amin'ny faritra mena sy mavo.
Bangkok nanamaivana ny famerana COVID-19 satria mihena ny isan'ny aretina vaovao.
Tsy mila vaksiny feno intsony ireo mpiaro ny trano fisakafoanana hisakafoanana.
Na izany aza, ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny 9 hariva - maraina.
Nihena 30% ny aretina vaovao tato anatin'ny 2 herinandro lasa izay ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiaramiombon'antoka hafa dia nangatahan'ny jeneraly praiminisitra Prayuth Chan-ocha mba hamoaka fepetra hamaritana ny fiatraikan'ny fepetra manalefaka amin'ny isan'ny aretina.
Tsy tokony hatao vaksiny feno sy / na handalo fitsapana COVID-19 izao ireo mpiaron-tompo mba hisakafoanana any amin'ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana any amin'ny faritra mena sy mavo, hoy ny fanambarana farany nataon'ny Royal Gazette Thailandey, hoy ny Bangkok Post.
Ny fanambarana dia nifanohitra tamin'ny tatitra teo aloha izay nilaza fa ny trano fisakafoanana maniry hisokatra indray dia takiana amin'ny famerana ny serivisy fisakafoanana ho an'ireo mpiaro vaksiny feno sy / na ireo izay nandalo fitsapana COVID-19 niaraka tamin'ny kitapo fanadinana antigen alohan'ny hidirana.
Miaraka amin'ny fanalefahana sisin-dàlana COVID-19 hafa izay notohanan'ny Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), ny trano fisakafoanana sy orinasa maro hafa dia vonona hisokatra, na izany aza dia mitoetra eo ny toeran'ny curfew amin'ny 9 pm-4 maraina, raha mbola asaina miasa ao an-trano ny mpiasa hatramin'ny 14 sept.
Ny fivoriana ampahibemaso misy olona tsy mihoatra ny 25 dia avela hiditra amin'ny faritra mena mena na dia mahazo alalana avy amin'ny manampahefana aza.
In Bangkok, avela hanohy fampianarana any an-toerana ny sekoly, rehefa mahafeno ny fepetra napetraky ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Ministeran'ny fampianarana ambony, siansa, fikarohana ary fanavaozana izy ireo.
Manomboka anio dia hisokatra ihany koa ireo trano fivarotana hatsaran-tarehy sy trano fivarotana mpanety, na dia tsy mahazo mandeha an-tongotra aza. Mandritra izany fotoana izany, ny spa spa sy spa fanorana dia tsy afaka manolotra fanorana tongotra fotsiny.
Ankoatr'izay, ny fitsangatsanganana isan-faritany avy amin'ny faritra mena sy maitso dia tsy ho ferana intsony. Avela hanohy serivisy mpandeha ihany koa ny seranam-piaramanidina, raha toa ka voafetra ho 75% ny isan'ny seza, hoy i Dr Taweesilp.
Isan'andro, ny Birao nasionaly misahana ny fahasalamana (NHSO) nanasa ireo mpiasan'ny sehatry ny fandraisam-bahiny handray fitsapana COVID-19 maimaim-poana eo anelanelan'ny 31 Aogositra sy 3 septambra ao amin'ny tranobe goavambe goavam-be any Bangkok izay afaka manodina olona 1,500 XNUMX isan'andro.